masoaryro LED zaridaina fahazavana mpamatsy ary mpanamboatra - Shina orinasa - Langxu Lighting.
Home > Products > Garden Light > masoandro zaridaina fahazavana > masoandro LED zaridaina fahazavana
Ireo jiro an-tokotanin'ny masoandro dia ampiasaina betsaka amin'ny toerana toy ny kianja an-tanàn-dehibe, zaridainan'ny fizahan-tany, tokotanim-ponenana, faritry ny oniversite ary faritra misy orinasa ary lalana an-tongotra ho an'ny jiro sy haingon-trano, izay isan-karazany amina endrika tsara tarehy sy kanto. mila fametrahana tariby ao ambanin'ny tany, tsy mila fandoavana vidin-jiro ho an'ny jiro, maharitra ary azo itokisana amin'ny miasa, tsy mila fitantanana, fotoam-panompoana maharitra ary fitahirizana angovo.Moho izany no mahatonga azy ireo ho jiro tsara sy jiro jiro maoderina ary angovo azo havaozina maitso. ny vokatra dia nandroso mafy tamin'ny fiaraha-monina ankehitriny!
Ny ankamaroan'ny designï¼š
Ny boaty bateria nandevina PVC dia afaka misoroka ny hafanana be loatra noho ny fiposahan'ny masoandro ary ny hafanana be amin'ny ririnina. Amin'ity tranga ity dia afaka miasa amin'ny bateria tsy miovaova ny batteria (tokony ho 25â "ƒ). Vokatr'izany, ny fiainana fanompoana an'ny bateria dia mety hivelatra amin'ny sisiny lehibe.
Hot Tags: masoandro LED zaridaina mazava, Shina, Manufacturers, mpamatsy, Factory, Wholesale, Buy, namboarina, ao amin'ny staoky, Cheap, Pricelist, teny nindramina, Style